Ukubhaka ku "Intelligence" kwimikhankaso ye-Drive-to-Web | Martech Zone
Umkhankaso wesimanje "wokushayela kuwebhu" ungaphezulu kokucindezela abathengi ekhasini elixhunyanisiwe lokufika. Kuyindlela yokusebenzisa ubuchwepheshe kanye nesoftware yokumaketha eqhubeka njalo, nokuqonda ukuthi ungayakha kanjani imikhankaso enamandla neyomuntu uqobo ekhiqiza imiphumela yewebhu.
Inzuzo ephethwe yi-ejensi esezingeni eliphakeme efana neHawthorne yikhono lokubheka hhayi kuphela analytics, kodwa futhi ucabangele isipiliyoni somsebenzisi jikelele nokuzibandakanya. Lesi isihluthulelo sokuheha nokugcina izivakashi zewebhusayithi ezithatha isenzo, amandla okufanisa okuqukethwe nokuziphatha kwabathengi kanye nokufunwayo. Izinkampani zidinga ukubhangqa okuqukethwe kwazo kuzo zonke iziteshi ezitholakalayo, noma ngabe i-TV eqondile, i-OTT, noma imithombo yezokuxhumana - okuqukethwe kufanele kwaziswe ngokuziphatha kwangempela. Imiyalezo yokudala kufanele isuselwe kumikhuba yokusetshenziswa ehlukanisa ababukeli abahlosiwe, ngakho-ke ukumaketha kuhlala kushaya imigomo efanele ngemilayezo efanele.
Amafemu wokumaketha athuthukile angabona ukuhlobana phakathi kwezimpendulo ezinamandla nokuguqulwa kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi nokuziphatha, abese ekwengeza okuqukethwe endizeni ukuze athuthukise amamethrikhi we-drive-to-web.
Ukuqondanisa idatha yokuqala neyesithathu kubalulekile. Lokhu akubandakanyi nje kuphela ukuqonda ukuthi isivakashi senzani kuwebhusayithi ngesikhathi sangempela, kepha nezenzo ababezenza ngaphambi kokufika kusayithi. Ukwenza lokhu kuqondanisa imikhankaso namasayithi ngokuthambekela okubanzi ekwenzeni ubuwena, lapho idatha ihlanganiswa kusuka kuzingxenyekazi ezahlukahlukene ezahlukahlukene kuhlanganiswa ukuthuthukisa imininingwane ebhekiswe kumuntu ngamunye. Ukuhlanganisa ngempumelelo imithombo yedatha eminingi kudinga idatha enkulu analytics kanye nokuqonda ukuthi iyiphi idatha ebaluleke ngempela maqondana nokukhiqiza imiphumela emihle egxile kumakhasimende.
Ukwakha indawo yokugcina imininingwane ephathelene nezenzo zezivakashi kuwebhusayithi kudinga isu elihlelwe kahle. Isisekelo se-tech sale ndlela ukusebenzisa ukulandelwa kwe-pixel ukuqapha isenzo saso sonke isivakashi. Ephethe ama-pixel trackers angaphezu kwe-1,000, abaphathi bomkhankaso bangakha "ibhuku lokudlala" lazo zonke izivakashi. Bangase baqale nge-pixel yokulandela ngomkhondo ye-UX, evumela iwebhusayithi ukuthi yenze ngcono ngokwengeziwe ukwenza ukuzulazula / ukuthenga / ukusetshenziswa kwesayithi ngokushesha futhi kube lula. Iphikseli yomhlinzeki wedatha yomuntu wesithathu nayo iyasetshenziswa ukuze ubone amanye amakhukhi alandelela isivakashi - anikeze ungqimba olubalulekile lwemininingwane evela eceleni. Ukulandela umkhondo wokuzibandakanya kwezokuxhumana ngesinye isinyathelo sokuqoqa idatha, ngokusebenzisa amathuluzi wokulandela ngomkhondo ukuhlanganisa imisebenzi yomphakathi nemikhankaso. Iphuzu lazo zonke lezi zinyathelo? Ukwenza amandla ukuhlukaniswa kwesikhathi sangempela nokuqondiswa okungcono ngenkathi kuthuthukiswa isiza lezivakashi ezizayo.
Ukubeka Ukusebenziseka Kokuzilolonga
Njengoba umthengisi edonsa idatha, angakhula okuqukethwe okuvumelana nezimo okuhambisana nokuziphatha nezimpawu. Okuqukethwe kwenziwa ngezifiso zombili kumuntu ngamunye nakwidivayisi yangempela. Lokhu yilokho wonke umuntu osemkhakheni we-drive-to-web abhekiswe kukho, kepha bayakhubeka ukuthi ungaziphatha kanjani zonke izingxenye ezihambayo. Ngokujabulisayo, kukhona amathuluzi we-tech ngaphandle (nabantu abanolwazi abasesigungwini) abanganikeza imininingwane yokwenza okuqukethwe nokulethwa kwemiyalezo.
Cabanga ngalezi zindlela ezinhle zemikhankaso yezikhangiso ezithuthukisiwe zedrayivu kuwebhu:
Qonda umkhiqizo. Kudingeka kube nokuqondaniswa phakathi kwemiyalezo edingekayo ukuze kuchazwe umkhiqizo nokuthi yini ezothatha ukwenza umthengi asuke ekwazisweni aye esenzweni.
Hlela imiyalezo kumadivayisi. Imikhankaso eqhutshwa ngezibalo ezithuthukisiwe izoba nedatha kumadivayisi ancanyelwayo wokubuka okuqukethwe bese izolungisa okuqukethwe ngokufanele.
Lungisa ukuhlelwa kwemidiya. Hlela ingxube yemidiya ukuze ihambisane nokuziphatha kwabathengi okutholwe kumsebenzisi analytics, ukuqonda umehluko ezimbonini (noma ngabe kungumkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba noma ubuchwepheshe.)
Ukungeza izinhlobo ezinkulu ze "intelligence" emkhankasweni we-drive-to-web kugcizelela amashifu abanzi ewebhu. Sisukile “kwiwebhusayithi ehlakaniphile” saya emakhasini nasezingxenyeni zokufika, saya ku- “web 2.0.” Futhi manje sesishintshela kolunye uhlobo, ngewebhusayithi yeselula indawo eyinhloko, kanye nekhono lokunikela ngemiyalezo yokuqukethwe kubantu abathile. Iwebhusayithi ayiseyona nje indawo yokuthatha ama-oda, ingumthombo ofanele wemikhiqizo yokuqonda ongayisebenzisa ukwakha ukuhlukaniswa, futhi ngasikhathi sinye uthuthukise futhi uthuthukise imikhankaso nabezindaba. Le yindlela entsha yokwenza idrive-to-web, ngokungafani nendlela yengubo yokufinyelela amehlo amaningi ngangokunokwenzeka futhi unethemba lokuthi abanye babo bazothatha izinyathelo.
Ukulandelwa kwezivakashi zewebhusayithi kunemba ngendlela exakile, ngokwesibonelo amandla okukala ukuthi umthengi uzulazula isikhathi esingakanani phezu “kokuthenga manje” ngaphambi kokuthi achofoze. Amafemu wokukhangisa nemikhiqizo efuna impumelelo yesikhathi eside emikhankasweni yabo yokushayela ukuya kuwebhu izokwamukela ukuhlakanipha kwedatha. Ukuqwashisa akuseyona inhloso, kumayelana nokukhomba ekuziphatheni.
Tags: imikhankaso yezikhangisoidatha enkulushayela ku-webukuziphendukela kwemveloiqembu lokuqalahawthorneamawebhusayithi ahlakaniphileamakhasi okufikaUkuqondiswa kwemikhumbiukuzenzelaizingosiimiyalezo yomkhiqizoukuthengaisikhathi sangempelaukuhlukaniswa kwesikhathi sangempelaukukhombaumuntu wesithathuukusetshenziswaUkulandela ngomkhondo kwe-pixelukulandelwa kwezivakashiizivakashiIwebhu ye-2.0
Ngithathe Unyaka Ngiye Ezingqungqutheleni, Nakhu Okwenzekile